प्रतिफलमा ओली सरकारको आयू लम्बिने अवस्था आयो | सिमान्तMarginal प्रतिफलमा ओली सरकारको आयू लम्बिने अवस्था आयो – सिमान्तMarginal
सुख पाउन राजनीति गरेकाहरुबाट नेपालीले दुख त पाइनै रहेका छन र पाउने पनि दुख नै हो। नेपाली जनताको चाहना सरकार बदलीरहनु पर्ने हैन, बरु स्थायित्वको स्थायित्व हो। त्यसैले व्यक्ति हैन संस्कार नबदलेसम्म हुने वाला केहि छैन। अहिले सरकार बदल्नै परेकाहरु नेपाल भित्र नभएर विदेश तिर छन, उनीहरुको काम नेपाललाई अस्थिरतामा धकेलेर त्यहाँको श्रोतमाथि हालीमुहाली गर्नु हो र त्यस पछि चीनको प्रभाव कम गराउंदै तिब्बती मामिलामा चलखेल गर्नु हो। अहिलेको राजनीति प्रजातन्त्र नभएर मनपरीतन्त्र बाहेक केहि होइन।
नेपालमा अस्थिरता चहाने धेरै बिदेशी मध्ये भारत भूकम्पका बेला नाकावन्दी नै लगाएर उदाङ्गो भएको छ। अहिले भारतलाई देखाएर भित्रभित्र अरुले झन खेल्ने मौका पाए, त्यो कुरा भारतीय पक्षले बुझेको देखिएन। ”विडम्बना नै भन्नुपर्छ, संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली, ठूलो र पुरानो प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने मुलुकहरूले नेपाल राष्ट्र र नेपालको प्रजातन्त्रलाई आजको स्थितिमा पुर्याएका छन्। त्यसैले आम नेपाली जनताको ठूलो पंक्तिमाझ भारत र पश्चिमा मुलुकहरू अलोकप्रिय छन् र उनीहरूको भूमिकाले नेपालमा चीनको प्रभाव र वर्चस्व बढाउँदै गइरहेको छ।”
यो ”चीनसँगको सम्झौता फेल गराउन सरकार ढाल्ने खेल” हो, मंगलबार र बुधबार मात्र चर्चामा आएको ओली सरकार ढाल्ने योजनाकार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणकै डिजाइन भएको खुलासा भएको छ।” खासगरी ओली सरकार भारतलाई घाँडो भएको छ, किन भने हालका प्रधानमन्त्रि ओलीले चीन भ्रमणका वेला गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुन नदिनु भारतका लागि ठुलो प्रतिष्ठाको बिषय बनेको बुझ्न सकिन्छ।
अहिले सरकार ढाल्ने चलखेलमा भारतको प्रष्ट हात देखेका जनताले उखान-टुक्का बाहेक केहि दिन नसकेको यहि सरकार बरु ठिक भन्न वाध्य भए। यो चलखेलमा मुछिएर देउवा नेतृत्व र नेपालि कांग्रेसलाई पनि राम्रो भएन। जनतामा जागेको राष्ट्रियताको भावले यस्तो चलखेललाई मन पराएन, त्यसैले प्रचण्डले प्रधानमन्त्रि हुनुभन्दा यहि सरकारलाई समर्थन गर्दा ‘हिरो’ हुन सकिने संकेत देखे। प्रतिफलमा ओली सरकारको आयू लम्बिन गयो।
प्रजातन्त्रको नाममा ”अस्थिरता” उपहार दिंदै आएको भारतले भूकम्पका वेला सारा अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुको उलनघन गर्दै नेपालमाथि चार महिना नाकावन्दी लगायो। जनताको भोटमा पराजित भएका मधेशी चार-छ जना नेताहरुलाई उचालेर आन्दोलन गरायो। सिके रावत जस्ता बिखण्डनकारिलाइ उचालेर नेपालको अखण्ड़ता माथि धावा बोलेको बुझिएको छ। यो सबै गतिविधि हेरेर बसेका नेपालि जनतालाई एकाएक सहाराको विकल्प खोज्न र त्यसको आसा चीन तर्फ़ देख्न स्वयं भारतले वाद्ध्य पार्यो। राम्रै रहेछ भने पनि अहिले भारतको समर्थनमा अभिव्यक्ति सुन्न समेत चाहान्नन- नेपाली जनता। नेपालमा भारत बिरोधि गतिबिधि बढनुमा भारतको ”ठुल्दाइ” संस्कारले धेरै भूमिका खेलेको छ। बडदो विश्वासको संकटले नेपाललाई पनि हित गर्दैन।
सरकार किन ढाल्ने? नयाँ सरकारले के काम गर्ने योजना बनाएको छ? त्यो त जनतालाई जानकारी हुनुपर्छ। अहिले सरकार ढाल्ने चलखेलमा भारतको प्रष्ट हात देखेका जनताले उखान-टुक्का बाहेक केहि दिन नसकेको यहि सरकार बरु ठिक भन्न वाध्य भए। यो चलखेलमा मुछिएर देउवा नेतृत्व र नेपालि कांग्रेसलाई पनि राम्रो भएन। जनतामा जागेको राष्ट्रियताको भावले यस्तो चलखेललाई मन पराएन, त्यसैले प्रचण्डले प्रधानमन्त्रि हुनुभन्दा यहि सरकारलाई समर्थन गर्दा ‘हिरो’ हुन सकिने संकेत देखे। प्रतिफलमा ओली सरकारको आयू लम्बिन गयो।
Previous Postजनतालाइ शोषण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, यो ब्यापार होइन अपराध होNext Postरहन्छ के राज्य, त्यहाँ अखण्ड: राष्ट्रकवि घिमिरे